Posted by တန်ခူး at 10:38 AM
ကဗျာလေးက ရင်ကို ထိတယ်။ တတ်နိုင်သလောက်လည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီနေပါတယ် မတန်ခူးရေ.. နီးစပ်ရာသူငယ်ချင်းတွေက တဆင့်လည်း လှူဖြစ်အောင်လှူပါတယ်။ အမှန်ဆို ဒီထက်မက လုပ်ပေးသင့်တာ။ မတန်ခူးပြောတဲ့ “ကိုယ်ချင်းစာတရား”လေးက တကယ်မှန်တယ်။ ငါ့မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ ညီအကိုမောင်နှမသာဆိုရင်... ဆိုပြီး တွေးလိုက်ရင် အိပ်မရတော့ဘူး... ကိုယ်ချင်းစာတရား လူတိုင်းလက်ကိုင်ထားနိုင်ကြပါစေ...
တန်ခူးရေ…တချို့သော သူတွေမှာ အဲသည် ကိုယ်ချင်းစာတရား ခေါင်းပါးလေတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအတွက် ရေတခွက်၊ ဆေးတခွက်၊ တမင်းတလုပ်ကို ပုတ်ချရက်တဲ့လူတွေလည်း ဒီလောကမှာ ရှိနေတယ်။
မွန်မြတ်တဲ့စေတနာ, ဖြူစင်တဲ့ အလှူ, ကြင်နာတဲ့နှစ်လုံးသား, တန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုယ်ချင်းစာတရား ,,,,,တသက်လုံးပီတိဖြစ်နေမှာပါ......
တချို့ကတော့ မပြိုင်သင့်တဲ့နေရာမှာထပြိုင်နေကြလို့ တော်ဝင်မျိုးတတွေ အရုပ်ဆိုးနေပါပေါ့
my heart is pain.
now i've no hope for our ppl.
Did u read manawhayi post in Eng.
it's nice reading for that ppl.
i think all of our ppl heart are pain.
ဒီကဗျာကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှိသူတွေကို ပိုခံစားတတ်မယ် ထင်ပါရဲ့…။ ကိုယ်ချင်းစာတရားက စေတနာတရားကို မွေးဖွားတယ် ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။
ရေးစရာစကားလုံး ပြောစရာစကားလုံးတွေ ရှားပါးကုန်ပိလား..ဟင်..
မတန်ခူး ပြောတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား အပြင် အမှန်ဘက်ကရပ်ရဲတဲ့သတ္တိ...ဒါတွေမရှိသမျှတော့...
ဖတ်ဖူးတဲ့ ဒီကဗျာလေး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်
ဆန္နပြ မှ သေတာမဟုတ်
သူတို့ ....အသက် နဲ့ အာဏာမြဲနေသရွေ့
တတိယအုပ်စု ဆိုတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်များ...
analysis ပေါ်မှာ အဖြေရှာမနေကြနဲ့
ဧရာဝတီတကြော ပေါလောပေါ် ဝိဥာဏ်တွေက
ကိုချင်းစာတရားလေးတော့ မခေါင်းပါးကြပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။ လူသားချင်း စာနာနိုင်ကြပါစေဗျာ။
တခုတ်တရ လာလည်ပြီးcommentပေးတာ ကျေးဇူးပါကိုဝင်းဇော်...နောက်လဲလာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်...
ကျေးဇူးပါနုရယ်...တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေကို စေတနာထက်ထက်သန်သန်နဲ့လှူတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့နု့အလှူကို သာဓုခေါ်ပါတယ်...
Anonymousရေ...ဟုတ်ပါတယ်..စေတနာပါမှ အလှူ မြောက်ပါတယ်....
မြတ်နိုးရေ...တတ်နိုင်သမျှကူညီလုပ်ဆောင်ရင်း နှလုံးသားအနာတွေကုစားကြစို့နော်...ဟုတ်ပါတယ်...တို့လဲနှလုံးသားတွေနာကျင်လို့ ရက်အတော်ကြာ ဆွံ့အသွားခဲ့တယ်...ကျေးဇူးပါနော်
ကိုစေးထူးရေ...ခုချိန်မှာတန်ခိုးရှင်ဖြစ်ရင် ကိုယ်ချင်းစာတရားမဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေထည့်ပေးချင်တယ်...
ဖတ်ဖူးတဲ့ ဒီကဗျာလေး ဝေမျှပေးတာကျေးဇူးပါAnonymousရေ...ရင်ထဲအတော်ထိတယ်...